Fanomezana ho an’ny ankizy sy tovovavy marefo miisa 105 tao amin’ny Akany Fifampandrosoana Isotry |
Fanomezana ho an’ny ankizy sy tovovavy marefo miisa 105 tao amin’ny Akany Fifampandrosoana Isotry
Ny asa fanampiana mivantana dia efa asa fanaon’ny minisiteran’ny mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy. Tanjona amin’izany ny hanamaivanana ny fahasahiranan’ireo sokajin’olona marefo na tra-pahasahirana.
Fikarakarana ny fahasalaman’ny aty vava sy ny nify, ny fanomezana azy ireo savony idiovany, ary fizarana sakafo ho an’ny ankizy sy tovovavy marefo miisa 105 eto amin’ny Akany Fifampandrosoana Isotry no nataon’ny minisiteran’ny mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy ny alakamisy 5 septambra 2019 teo.
Ho an’ireo ankany hafa manerana ny nosy, dia efa misy fanadiahadiana ataon’ny minisitera miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka manomboka amin’ity volana septembre ity hamaritana izay asa tokony hatao ho an’ny ankizy tsirairay (Projet de vie) indrindra fa ireo ankizy latsakin’ny 15 taona.
Manomboka amin’ity taona ity dia akany miisa 40 ao anatin’ny faritra Vatovavy Fitovinany, Matsiatra Ambony, Atsinanana, ary Analamanga no hanombohana ny asa fanampiana mivantana ireo ankizy.
Fankasitrahana sy fanolorana mari-boninahitra: teto Nosy be Hell ville	Fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasan’ny Minisitry ny Mponina sy ny filohan’ny fondation Akbaraly no sady filoha mpanatanteraka ny ONG La vita per te Dr Francesco Cimino.